26 October, 2018 in Wararka by
Wararka aan ka heleyno Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in Ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM ay isaga baxeen deegaanka Fiidow ee Shabeellaha Dhexe oo ay maalma ka hor aay la wareegeen.
Deegaanka Fiidow ayaa Ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM waxa ay kala wareegeen Al-Shabaab oo maamulayay tan iyo markii ay la wareegeen Sanadkii 2015-kii.
Wararka hadda aan heleyno ayaa waxa ay sheegayaan in Ciidamada Jabuuti oo howlgalka deegaankaas lagula wareegay qeyb ka ahaa ay aadeen degmada Jalalaqsi halka kuwa Burundi ay soo aadeen dhinaca Magalada Jowhar.
Lama oga sababta ka danbeysa in Ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM ay isaga soo baxaan deegaanka Fiidow,waxaana warar haatan soo baxaya ay sheegayaan in Al-Shabaab oo aan ka fogeen deegaanka Fiidow ay dib ula wareegeen.
Ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa inta badan isaga baxa deegaannada ay Al-Shabaab kala wareegaan,waxaana dhawaan jirtay in si lamid ah ay Ciidamada dowladda ay dib uga soo baxeen tuulooyinka Basra,kulanta iyo deegaanno kale oo hoostaga degmada Balcad oo ay dhawaan la wareegeen.
Xukamadda R/wasaare Xasan Cali Kheyre, ayaa lagu dhaliila inta badan in aysan raali ka aheyn dagaalo lagu qaado Maleeshiyada Al shabaab oo dhibaato xooggan ku haaya shacabka ku dhaqan deegannada aay Maamulan.
Itoobiya oo ka hortagtay weeraro Al-Shabaab ay ka fulin rabeen Addis Ababa